शितगंगाको लाहापेमा स्वास्थ्य चौकीको नगरप्रमुख अधिकारीद्धारा उद्घाटन | Hindu Khabar
शितगंगाको लाहापेमा स्वास्थ्य चौकीको नगरप्रमुख अधिकारीद्धारा उद्घाटन
शितगंगा, २५ माघ । अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकाले स्वास्थ क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता लिदै बिकाश निर्माणमा फड्को मारेको नगर प्रमुख सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताउँनुभएको छ ।
शितगंगा नगरपालिका भौगोलिक क्षेत्रले पछाडि परे पनि देश कै ठूलो नगरपालिका भनेर चिनिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम देखि धेरै टाठा रहेको बिकासको क्षेत्र बाट अति नै कमजोर रहेको यस नगरपालिका जिल्लाको ६० प्रतिशत जमिन ओगटेको छ ।
शितगंगाको वडा नं. ८ लाहेपेमा नगरपालिकाकै योजनामा निर्माण गरिएको लाहेपे स्वास्थ चौकी एक बृहत कार्यक्रम गरि नगरप्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले उद्धघाटन गर्नुभयो । धेरै चुनौती भएपनि नगरको विकासका लागी दिन रात खट्दै आएको र आफुले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ र शिक्षालाई दिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख अधिकारीले आफुले पाउने सरकारी सेवा सुबिधा समेत आफ्नो नगरका गरिव अनि जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि दिने घोषणा समेत गर्नु भएको थियो । यस्तै स्वास्थ क्षेत्रमा जहाँ स्वास्थ चौकी देखि टाढा रहेका जनतालाई गाउँ गाउमा स्वास्थ इकाइ स्थापना गरि सेवा दिएको अधिकारी बताउनुभयो ।
देशको परिस्थितिले आफुहरुलाई अप्ठ्यारोमा परेको र बिकाश निर्माणमा असर परेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै यसै वडाका वडा अध्यक्ष रुकेस आलेले नगरपालिकाले पिछडिएको ठाउमा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरि सेवा दिएकोमा लाहेपेका जनता धेरै खुसी भएको बताउनुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर केसि, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हेमनाथ भुसालले मन्तव्य राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नगरले प्राथमिकता दिएको बताए । कार्यक्रम लाहापे स्वास्थ चौकिका इन्चार्ज लक्ष्मण पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो ।